Noely 2008: Fifaliana fa tsy mitady fahalavorariana
2008-12-25 @ 17:47 in Andavanandro
Mety hahagaga anareo izany lohateny izany. Efa nandalo ny krismasy 2008 avokoa ny ankamaroantsika rehetra ary irariana mba ho nahafinaritra izany. Ny maraina aloha dia tany am-piangonana, fety kristiana aloha izy voalohany indrindra vao fety araka izay itiavantsika azy. Raha ny vaovao televiziona frantsay mandeha eto Madagasikara no topazamaso dia ny resaka "pere noël" no tena nanjaka efa ho herinandro lasa izay. Mahay manandratra ny azy izy hany ka tsy mahagaga raha misy ny Ben'ny tanàna eto Madagasikara no mihazakazaka fandrao hahazo fanomezana avy any koa angaha, saingy vazivaziko izany fa mafana loatra angaha ny eto Madagasikara ka aleony maka hatsiaka kely any aloha. Maro ny olona mamonjy ny ambanivohitrany rehefa andro tahaka izao ka mety ho any ny ambanivohitrany na dia Malagasy jerena aza izy (ary mbola vazivazy ihany izany!).
Ny tolakandro amin'izay dia samy manana ny azy amin'izay. Eo ny mivorivory ka manala vazony amin'ny zava-pisotro mafana. Eo ny mijery televiziona izay tsy dia misy fandarahana tsara loatra raha ny eto Antananarivo, satria tsy misy VIVA (hehehe), ka raha manana film aleo izany no alefa na ny lahatsarim-pianakaviana. Tsy vitsy ny mamonjy ny any Analakely mivezivezy eny, ka angamba tsy tafaverina intsony izay ireny mpampiloka tsy ara-dalàna ireny, satria fandikan-dalàna roa avy hatrany no ataony: Voalohany, tsy mandoa ny haba mifanaraka amin'izany izy ireo; faharoa, mampilalao olona tsy ampy taona izy ireo... satria dia ny roa ampahatelon'ny manjifa eo aminy raha kely indrindra no tsy ampy taona, izay aloha ny lalàna eto Madagasikara. Zavatra tsara avy amin'ny Kaominina Antananarivo renivohitra aloha izany na dia minia mamono arabe tsy tokony hovonoina mandrakaria aza ny mpivarotra anaty arabe mampijanona tanteraka ny fifamoivoizana raha ny talata teo no nojerena. Toy ny nitaky ankolaka mihitsy ireo mpivarotra anaty arabe ireo mba hovonoina tanteraka ny arabe manerana an'Analakely, Ambodifilao, Behoririka ary Tsaralànana rehefa andro fety na inona izany na inona.
Ny ahy indray moa mba nijery ny hira sy ny tsianjerin'ankizy aho. Ankizy no resaka noho izany tsy hitady zavatra lavorary na oviana na oviana aho. Ny fifalian'izy ireo fotsiny dia ampy izay. Fifaliana indrindra ho azy ireo raha mba manatrika ny zavatra kely ataony ny rainy sy ny reniny na ny iray amin'ireo farafaharatsiny, ary tokony ho mba ho faly tahaka izany ihany koa ny ray aman-drenin'ireo zaza ireo mahita ny fibadabadan'ny zanany eny an-tsehatra eny. Tsy ho raharahany izay havitsian'ny mpijery raha mijery eo ny olona tiany indrindra, ary tsy ho safononoka na oviana na oviana ny fifaliany sy ny zavatra tsara ataony raha tsy mba manatrika eo ny ray aman-dreniny na ny mpitaiza azy akaiky ihany koa.
Endrey izany hetaheta mahazo ny iray ka tsy misalasala velively izy midina amin'iny tohatra iny mba hisotro rano eny amin'ny reniny; ary tsy menatra ihany koa izy miakatra tsimoramora ny sehatra indray mba hanatontosa ny anjara hira sy tsianjeriny rehefa afak'hetaheta. Mba mifaly ery ny mpanatrika fa tokony ho efa tsianjery veloma no atao, nefa noho ny fahataran'ny ankizy vitsivitsy tsy nahatratra fanombohana dia nomena fahafaham-po ihany izy ireo hanao ny anjara tsianjeriny... Ny mpanolotra manonona ny hoe "veloma", ilay zaza voalohany nanao ny "arahaba". Tsy maintsy karohina ve ny lavorary? ataoko fa rehefa mifaly amin'ny fo madio dia efa tsara izany.